कब्जियत त भएको छैन ? यसो गर्नुहोस् - सिम्रिक खबर
कब्जियत त भएको छैन ? यसो गर्नुहोस्
काठमाडौँ । धेरैले भोगिरहेको समस्या हो, कब्जियत । कतिपय अवस्थामा यो क्षणिक पनि हुनसक्छ । तर, खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिएन भने कब्जियतले गंभिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । हामीहरुले समयमा खाना नखाने, पानी प्रशस्त नपिउँने, खाना खाँदा चपाएर नखाने कारणले यस प्रकारको समस्या देखिने गरेको छ । कब्जियत पाचन प्रक्रियामा गडबडीका कारण हुने एक रोग हो । मल निष्कासनको समयमा ढिलाई हुनु, सरल तरिकाले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वा दैनिक एकपटक पनि सजिलोसँग दिसा गर्न नसक्ने अवस्थालाई कब्जियत भनिन्छ । कब्जियत लामो समय रहिरह्यो भने यसले शरीरलाइ दुषित पार्दै पाचन प्रक्रियालाई तहसनहस बनाइदिन्छ त्यसकारण शरिर स्वस्थ रहन पाचन प्रणाली विकाररहित हुन आवश्यक छ । कब्जियतका कारण पीडित व्यक्तिको पेट राम्रोसँग सफा हुन पाउँदैन । जसका कारण तल्लो आन्द्राले तरल पदार्थ सोस्न बढी समय लाग्छ, जसबाट सुख्खा र कडा मल जम्मा हुने क्रम बढ्दै जान्छ र उसलाइ मल त्याग गर्न कठिनाइ हुन्छ । कब्जियतको समस्या हुनेलाई राम्रोसँग दिसा हुँदैन, दिसा सुक्खा हुन्छ र थोरै मात्र बाहिर आउँछ । सामान्यतयामा मानिसले दिनमा एकपटक त दिसा गरेकै हुन्छ । तर, जसलाई कब्जियतको समस्या छ, उसले लगातार धेरै दिनसम्म मल त्याग नगरेको हुन सक्छ ।
यसकारण हुन्छ कब्जियत : कब्जियतको मुख्य कारण समयमा खाना नखाने बानी हो । त्यसैगरी हाम्रो खानामा तेलमा तारेका मैदाका परिकार, अत्यधिक पिरो मसलेदार चटपटे खाना हुनु पनि यसको कारण बन्ने गरेको चिकित्सको भनाइ छ । पेनकिलर, नार्कोटिक्स वा दुःख कम गर्ने औषधि सेवन गर्नु, हर्मोन्सको गडबडी, थाइराइड वा मधुमेहको बिरामी हुनु, पहिला खाएको खाना पच्न नपाँउदै फेरि खाना खानु, पानी कम पिउने बानी वा राम्रोसँग चबाएर खाना नखाँनु, मानसिक तनाव, चिन्ता, रिस वा शोकको अवस्थामा खाना खाँदा, रेसायुक्त परिकारको कमी, धेरै चिया, कफी, चुरोट, रक्सी, सुर्ती आदिको सेवन, व्यायाम गर्दै नगर्नु, धेरै आराम गर्न रुचाउने बानी, खाना खानेबित्तिकै फ्रिजको चिसो पानी पिउनु, राति ढिला खाना खानु र खाना खानेबित्तिकै सुत्नु, बिहान दिसा गर्न जान अल्छी गर्नु, कम खाना खाँदा मल पनि कम बन्नु र भोक नलाग्नाले पनि कब्जिय हुने गर्दछ । त्यतिमात्र नभएर शारिरिक क्रियाकलाप नगर्नेहरुको शरिरको मेटाबोलिजम स्लो हुन थाल्छ जसका कारण खाना सही तरिकाले पच्दैन र कब्जियतजस्तो रोग लाग्न थाल्छ ।
कब्जियतका लक्षण : कब्जियत भएको समयमा दिसा धेरै साह्रो र सुक्खा हुने गर्दछ । हप्तामा ३ पटकभन्दा कम दिसा लाग्नु, दिसा गर्ने वेलामा धेरै गाह्रो हुनु, दिसा गर्न धेरै बल गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, दिसा गरिसक्दा पनि अझै बाँकी छ जस्तो लाग्नु, पेटमा दुख्नु, टाउको दुख्नु, पेटमा ग्यास जम्मा हुनु, पेटको ऐठन, अपच हुनु, वाकवाकति लाग्नु र भोक कम लाग्नु, खुट्टामा दुखाइ हुनु, रिंगटा लाग्नु, सास गनाउनु, ढाड दुख्नु, एकदमै कमजोरी भएको अनुभव हुनु, पेट भारी भएजस्तो अनुभव हुनु, ब्लडप्रेसर बढ्नु, पेटमा ग्यास भरिनु,डिप्रेसन हुनु, घाँटी दुख्नु आदि हुन् ।
उपचार के ? : थोरै मात्रामा पानी पिउनाले कब्जियत हुन सक्छ । यो समस्यामा आन्द्रामा जम्मा भएको खाना सुक्छ, त्यसैले दिसा गर्न अत्यधिक बल लगाउनुपर्छ । यस्तो समस्या भएका व्यक्तिले बढी मात्रामा पानीको सेवन गर्नुपर्छ । एक दिनमा करिब ३–४ लिटर पानीको सेवन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । खाना खानुभन्दा आधा घन्टाअघि वा पछि मात्र पानी पिउने बानी बसाल्नुपर्छ । मेवा र अम्बाको सेवन गर्ने, तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउने, बदामको तेल, कागती पानी, रातिमा तातो दूध पिएर सुत्ने गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी हरियो सागसब्जी, फलफूल वा सलादमा अत्यधिक मात्रामा फाइबर पाइन्छ । कब्जियतबाट छुटकारा पाउन पालकको जुस पनि लाभदायक हुन्छ । सुक्खा अंगुर दूधमा मिलाएर उमाल्ने र राति सुत्नुअघि पिउने, दिनहुँ व्यायाम गर्ने गर्नुहोस् । सुत्नुअघि राती तातो दुधमा एक चम्चा घ्यू हालेर पिउनुहोस् । दुधमा चीनीको साटो मह वा मिश्री प्रयोग गर्नुहोस् । राती यो उपाय अपनाउँदा बिहान मज्जाले पेट सफा हुन्छ । तुरुन्त पेट सफा गर्न कागती पानीले पनि सहयोग पुर्याउँछ । एक गिलास मनतातो पानीमा एउटा कागती निचोरेर पिउनुहोस् । राती सुत्नुपूर्व यसो गर्दा भोली बिहान तपाईंको पेट हल्का हुन्छ । चार चम्चा सौफ एक गिलास पानीमा उमाल्नुहोस् र पानी चिसो भएपछि त्यसलाई छानेर पिउनुहोस् । यसो गर्दा कब्जियतबाट राहत पाउनुहुनेछ । पुरानो कब्जियतका लागि २५ ग्राम किशमिशलाई रातभरी पानीमा भिजाउनुहोस् र नियमित बिहान सेवन गर्नुहोस् । जतिसुकै पुरानो कब्जियत भएपनि यसो गर्दा राहत पाइन्छ । बिहान खाली पेटमा स्याउ खाँदा यो रोगबाट चाँडै नै आराम मिल्छ । प्रत्येक दिन काँचो पालुङ्गोको रस दुई पटक पिउँदा केही दिनमा नै कब्जियत ठिक हुन्छ । कब्जियतबाट ग्रसित व्यक्तिले फलको अत्यधिक सेवन गर्नुपर्छ । मेवा, स्याउ, मौसम, नरिवल, सुन्तला, अंजिर, काँक्रो, गाजरलगायतका फलफूल खानुपर्छ । सागसब्जीको रस, ताजा फलफूलको रस, नरिवलको पानीले कब्जियतलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । कब्जियत ठिक गर्नका लागि आहारमा हरियो सागसब्जी र आँटाको रोटी समावेश गर्नुपर्छ । कब्जियतबाट छुटकारा पाउनका लागि प्रतिदिन तीनदेखि चार लिटर पानी पिउनुहोस् ।
कब्जियतबाट बच्ने उपायः आफ्नो आहारमा यस्ता खाना समावेश गर्नुहोस् जसलाई पचाउन शरिरले धेरै मेहनत गर्न नपरोस् । यसका लागि खानालाई मज्जाले चपाएर खानुहोस् । बिहान शौचालय जान अल्छी गर्दा पनि कब्जियतको समस्या देखा पर्न थाल्छ । केही मानिसहरु हतार भइसक्दा पनि शौचालय जाँदैनन् जसका कारण दिसा पेटमा नै सुक्न थाल्छ र कब्जियत हुने गर्दछ । कसैलाई पुरानो कब्जियत छ भने घरेलु उपायका साथै खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । राम्रोसँग पेट सफा भएको छैन भने तारेको भुटेको खानेकुरा नखानुहोस् । साथै मैदा, बेसन र मसालेदार भोजन पनि नखानुहोस् । बेलुकाको खाना सुत्नुभन्दा दुई वा तीन घण्टा अघि नै गर्नुहोस् । खाना खानु एक घण्टा अघि कम्तीमा एक गिलास पानी पिउनुहोस् । आफ्नो खानामा फाइबरयुक्त खानेकुरा समावेश गर्नुहोस् । खाना खाने बेला वा खाएको कम्तीमा आधा घण्टाभित्र पानी नपिउनुहोस् । कब्जियत खराब दिनचर्या र खानपानको कारण हुने गर्छ । त्यसैले सक्रिय जीवन विताउनुपर्छ । शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार स्वस्थ्य र सुपाच्य भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ । फाइबरयुक्त सब्जी, फलफूल र सलादको सेवनमा जोड दिनुपर्छ । यससँगै व्यायाम पनि आवश्यक हुन्छ । दिसा(पिसाबलाई लामो समय रोकेर राख्न हुँदैन ।
ढिडो र गुन्द्रुक : गाँउमा हेला, शहरमा सौख !
एउटा कछुवाले बदल्न सक्छ तपाईंको भाग्य : बास्तु टिप्स
पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस
सावुनपानी प्रयोग गर्ने कि स्यानिटाइजर ?
मास्क लगाउँदा गल्ती त गरिरहनुभएको छैन ? कस्ता मास्क कसरी लगाउने ?